Akụkọ - A ga-agbanwe ihe nzacha nke nzacha nke nhicha mmiri ugboro ugboro. Ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-eji ya? Ga-aghọta mgbe ị gụsịrị
A na-agbanwe ihe nhicha nke ihe nhicha mmiri nke ụlọ. Enwere m ike ịsacha ya ma gaa n'ihu na-eji ya? Nke a adịghị mma!
maka nchekwa nke iji mmiri eme ihe n'ozuzu, Anyị kwenyere na ọtụtụ ezinụlọ etinyela ihe nhicha mmiri. Mmiri mmiri na-asọpụta mgbe ehichachara ya site na nhicha mmiri ma kpochaa ya iji mee ka mmiri dị mma karịa. Enwere ike ịsacha mmiri mmiri pọmpụ, n'ọtụtụ dị ukwuu, otuto maka mmezi ihe. Otu na nzacha ihe nhicha na-eme ka mmiri dị ọcha, n'ikpeazụ, ihe nzacha ahụ na-egbochi adịghị ọcha.
N'ihi nke a, ihe nzacha ahụ ga-adị ọcha mgbe ogologo oge gasịrị, ọ ga-efunahụ ọrụ nke ịsacha mmiri. Site na oge a, ekwesịrị dochie ihe nza ahụ iji nọgide na-eji ihe nhicha mmiri. Mgbe iji ihe nzacha mmiri, ọtụtụ ndị enyi ekwuola nsogbu, ya bụ, ụgwọ nke iji ihe nhicha mmiri iji dochie ihe ndozi ahụ ga-akarị ụgwọ nke nzacha mmiri.
N'ezie, nke a bụ ikpe. Ọnụ ego nke ihe nhicha mmiri bụ ihe dị ka ọtụtụ puku iberibe. Agbanyeghị, ihe nhicha mmiri nwere ọtụtụ ihe nza, ụfọdụ ọtụtụ ihe nzacha, na ụfọdụ narị narị ihe nzacha, na ụfọdụ ihe nzacha na-ewe ọtụtụ ọnwa. Ọ kwesịrị ka edochie ya otu ugboro kwa ọnwa isii ma ọ bụ otu ugboro n’afọ. Ọnụ nke ihe nzacha ahụ gbakwunyere na saịtị ahụ iji dochie ihe nzacha ahụ dị oke elu.
Friendsfọdụ ndị enyi ekwuola na ebe ọ bụ na ọ dị oke ọnụ ịgbanwe ihe nzacha, ị nwere ike wepụta ya saa gị onwe gị wee jiri ya mee ihe? Sichaa ya mmiri ma tinyeghachi ya ọzọ, ọ ga-emetụta ojiji ahụ?
Nke mbu, nhazi ihe nzacha a adighi nfe dika anyi chere. E kewara ihe nzacha n'ime ihe dị iche iche maka nzacha dị iche iche nnukwu na obere adịghị. Anyị na-ewepụta ihe nzacha, ihe niile anyị nwere ike ime bụ iji mmiri sachapụ ihu ihe nzacha ahụ. Ọ ga-ekwe omume ịsachasị adịghị ọcha ụfọdụ, mana ọ nwere obere mmetụta.
Ihe nhicha ọhụrụ ahụ na-adịkarị ọcha na ọdịdị, ọ nwere ike ịdị oji ma ọ bụ aja aja mgbe o jisịrị oge. Nke a bụ adsorption nke adịghị ọcha ụfọdụ. Ihe ndị a enweghị ike ịsacha naanị site na ịsa ahụ na mmiri. Ọbụna ma ọ bụrụ na elu ahụ dị ọcha, mmetụta nzacha ahụ adịchaghị mkpa ọ nwere N'ezie, ọ ka na-emetọ ebe mmiri dị.
Ya mere, maka echiche ahụike na nchekwa, ịkwesighi igbu oge iji dochie ihe nza ma hichaa ihe ndozi ahụ n'onwe gị. Iji ezi uche mee ihe nke ihe ndozi nwere ike ime ka mmiri dị ọcha n’ezie. Styledị ihe nhicha mmiri ahụ agbanweela mgbanwe dị ukwuu. Fọdụ ndị na-ehicha mmiri nwere ngbanwe dị mfe nke ihe ndozi. Nwere ike ịzụta ihe nzacha ahụ n'onwe gị iji dochie ya. Enwekwara ihe ọhụrụ ndị ejirila ogologo oge. Ọ bụrụ n ’achọghị ịgbanwe ihe nzacha ahụ ugboro ugboro, I nwekwara ike dochie ihe eji eme ka mmiri dị ọcha n’ụlọ gị na nke dị mma.